Ungawubhala njani umxholo apho iindwendwe zimisela ixabiso lakho | Martech Zone
Ngaphandle ko ixabiso, ixabiso lihlala limiselwa ngumthengi. Rhoqo, elo xabiso liya kuxhomekeka ekubeni umthengi uyisebenzisa kakuhle kangakanani imveliso okanye inkonzo yakho. Uninzi lwesoftware okanye inkonzo (i-SaaS) abathengisi basebenzisa ukuthengisa okusekwe kwixabiso ukumisela amaxabiso abo. Oko kukuthi, endaweni yokuxabisa ireyithi ethe tyaba yenyanga okanye ireyithi esekwe ekusetyenzisweni, basebenza kunye nomthengi ukumisela ixabiso elinokubonelelwa liqonga kwaye emva koko balibuyisele kwixabiso elilinganayo kuwo omabini amaqela.
Nanku umzekelo… ukuthengisa nge-imeyile. Ndingabhalisela enye yeenkonzo zokuthengisa nge-imeyile nge- $ 75 ngenyanga okanye ndiye kwinkonzo yenkulumbuso ye- $ 500 ngenyanga. Ukuba andiyikhuthazi i-imeyile kunye yisebenzise ukukhuphula, ukufumana okanye ukugcina abathengi, $ 75 ngenyanga inexabiso elincinci kwaye inokuba njalo kaninzi imali yokuchitha. Ukuba bendihamba ne- $ 500 yenkonzo yenyanga kwaye bancedisa ekuphuhliseni imiyalezo yam, bandincedile ukwenza amaphulo e-upsell, ukufunyanwa kunye nokugcinwa… ndingaphumelela ekusebenziseni i-imeyile ukuqhuba amakhulu amawaka eedola. Lixabiso elikhulu elo kwaye kufanelekile ukuba uhlawule iimali.
Kukho isizathu sokuba kutheni abathengisi sebenzisa ipesenti kwintetho yabo yokubonelela ubungqina bokunyuka kwexabiso kwiimveliso kunye neenkonzo zabo. Ukuba nditshintshele kwimveliso yakho kwaye inokundisindisa nge-25% kwimirhumo yam yokuhlawula, umzekelo, oko kuthetha amawaka eedola kwishishini. Kodwa ukuba ishishini lakho lihlawula izigidi zeedola zemirhumo, ixabiso lemveliso likhulu kakhulu, liphezulu kakhulu kwishishini lakho kunelam.
Abarhwebi bahlala benza impazamo yokuchaza ixabiso elikhethekileyo Echaza ixabiso elisisidima ngokusekwe kwezabo izimvo. Oku kungakhokelela kwisikhewu kulindelo phakathi kwento ocinga ukuba lixabiso lakho kwaye umthengi uchonga ixabiso lakho. Umzekelo: Sisebenza nabaxhasi abaninzi kwiinjini zabo zokuSebenzisa. Abathengi abanamaqonga aqinileyo, ukuthengisa okwakudala kunye neenkqubo zophuhliso, kwaye zinokuphumeza utshintsho olukhulu ukuphendula kwiimfuno zeenjini zokukhangela zifumana ixabiso elincomekayo kwiinkonzo zethu. Abathengi abangamameliyo, abangazalisekisi iinguqu, kwaye bacela umngeni kwizindululo zethu zihlala zisokola kwaye abaliqondi ixabiso elipheleleyo esinokuthi silinike.
Njengoko ubhala umxholo wakho wentengiso, kukho izicwangciso eziza kunceda:
Sebenzisa iipesenti kwiingxelo zakho zexabiso ukuze iindwendwe zenze izibalo kunye nokubala ukonga kunye nokuphuculwa kwezitetimenti zabo zengeniso kunabathengi bakho.
Ukubonelela ngokusetyenziswa kwemeko, iimeko zokwenza, kunye neendlela ezilungileyo zokunceda iindwendwe zakho zichonge ixabiso lombutho wazo.
Nika umxholo othetha ngokuthe ngqo kumashishini athile, iintlobo zeenkampani, kunye nabaphulaphuli ukuze iindwendwe zakho zifumane ukufana phakathi komxholo wakho kunye neshishini labo.
Nikezela ngobungqina obuvela kuluhlu lwabathengi, izihloko zabo kunye nezikhundla kwinkampani, ukuze abo bathatha izigqibo abazithelekisa nezi zihloko kunye nezikhundla babachonge.
Abanye abantu bakholelwa ukuba ukuthengisa okusekwe kwixabiso kunye nokuthengisa kuyakhohlisa. Bakholelwa ekubeni wonke umntu kufuneka ahlawule ixabiso elifanayo. Ndiza kuthetha ngokuchaseneyo. Iinkampani ezinamaxabiso asicaba ngaphandle kokukhathalela umthengi kunye nendlela ezinokuthi zisebenzise ngayo iimveliso kunye neenkonzo zakho. Eyona nto imbi kakhulu-intengiso eqinisekisa ukutyelelwa, inqanaba, ingeniso, njl.njl. Bayalayishwa ngaphambili, ukubandakanyeka kwemali-phantsi ukuze usebenzise imali yakho kwaye uhambe xa ungazifumani iziphumo abazithembisileyo. Kungcono ndisebenze nomthengisi ondimameleyo, oqonda izixhobo zam, aqonde iimfuno zam, kwaye asebenze ukubonelela ngexabiso elidibana nohlahlo-lwabiwo mali kwaye libonelela ngexabiso endilifunayo.
tags: inaniumgangatho wokumaixabiso lokuthengisaixabiso elithengiswayo